I-Raw Testosterone propionate powder Abavelisi kunye nabaThengisi-abaMveliso
I-Testosterone Propionate powder yenye yeentlobo ze testosterone esters. Esi sidakamizwa si-steroid se-anabolic kwaye sinye sesona saziwa kakhulu ekwakheni umzimba. Injongo yalo kukunyusa ubukhulu bomzimba kunye namandla.I-Testosterone Propionate yifutshane ekwenzeni i-testosterone. I-Testosterone Propionate powder inhibisa ukukhutshwa kwe-gonadotropin kwi-pituitary gland kwaye ishicilela ukuveliswa kwe-estrogen kuma-ovari, ngaloo ndlela iyancipha amanqanaba e-estrogen anokugcina. Ukongeza, le nkonzo ikhuthaza ukugcinwa kweempawu zesini zesini kwaye iboniswe ukuba i-testosterone ithathe indawo yamadoda e-hypogonadal.
I-video ye-Testosterone Propionate ephakamileyo (57-85-2)
I-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Inkcazo
I-Raw Testosterone Propionate powder yi-short-acting in-forming formulation ye testosterone. I-Testosterone inhibitshi i-gonadotropin secretion kwi-pituitary gland kwaye isusa i-estrogen yokuvelisa kuma-ovari, ngaloo ndlela iyancipha amanqanaba e-estrogen anokuphela. Ukongeza, le nkonzo ikhuthaza ukugcinwa kweempawu zesini zesini kwaye iboniswe ukuba i-testosterone ithathe indawo yamadoda e-hypogonadal.
I-Raw Testosterone Propionate powder itholakala kuphela kubantu abasebenzise okanye bathathe le nkunkuma. I-ester ye testosterone ene-propionate endaweni ye-17-beta isikhundla. Iimpembelelo ze-testosterone kubantu kunye nezinye izilwanyana zenzeke ngeendlela ezimbini eziphambili: ngokusetyenziswa kwe-androgen receptor (ngokuthe ngqo okanye njenge-DHT), kwaye ngokuguqulwa kwi-estradiol kunye nokusebenziselwa kwee-receptors ezithile. I-testosterone (T) yamahhala inokuthunyelwa kwi-cytoplasm yeeseli ezijoliswe kuyo, apho iyakwazi ukubopha kwi-androgen receptor, okanye iyancitshiswa kwi-5 & alpha; -dihydrotestosterone (DHT) nge-enzyme ye-cytoplasm 5 & alpha; -kuqhuba. I-DHT ibopha kwi-androgen efanayo ye-receptor ngakumbi nangakumbi kuneT, ukuze amandla ayo androgenic ayenze nge-2. Ixesha le-5 le-T. I-T-receptor okanye iDHT-receptor complex ishintsha utshintsho oluvumela ukuba lingene kwinucleus yeseli kwaye lubophe ngokuthe ngqo kwiimpawu ze-nucleotide ezithile ze-DNA ye-chromosomal. Imimandla yokubophezela ibizwa ngokuba yi-hormone response elements (HREs), kwaye ithintela umsebenzi we-transcription of certain genes, ukuvelisa iziphumo ze-androgen.
I-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Raw Testosterone Propionate powder
Igama leKhemikhali I-Raw Testosterone Propionate powder;
Iqela leziyobisi steroid ester
Inani leCAS 57-85-2
I molecular Fi-ormula C22H32O3
I molecular WSibhozo 344.495 g / mol
IMasaisotopic Mass 344.235 g / mol
Ukuxuba Point 244 ku-252 ° F (NTP, 1992)
Ubuncwane bamanzi 1.48 mg / L (kwi-25ºC)
I-Biological Half-Life Akukho mhla
umbala amakristal ezimhlophe okanye ezimhlophe
okanye i powder emhlophe okanye i-white-creamy-white crystalline powder
Sukufaneleka ngaphantsi kwe-1 mg / mL kwi-76.1 ° F (NTP, 1992)
Sisibetho Tukushisa Ukushisa kwamagumbi
Aukuguquka I-1,3-Dimethylbutylamine isetyenziselwa ukufundisisa ukusetyenziswa kwe-resin ye-polymethacrylate engekho mfuneko njengesiqendu esisezantsi kwi-chromatography yamanzi ene-UV.
Yintoni i-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2)?
I-Testosterone propionate powder yinto ephuculwayo yokukhulula i-anabolic steroid nge-half half-life. Esi sibonakaliso sivumela umsebenzisi ukuba asebenze imizuzu eyi-8-10 ye-2-4 iiveki njengamaqondo ephambili eplasma yegazi ephumelele kwiiveki ze-17-XNUMX. I-synthetic androstane steroid ephuma kwi-testosterone ngendlela ye-XNUMXβ propionate ester ye testosterone. I-Testosterone propionate powder ngumveliso osebenzayo. I-Testosterone yinto enamandla kakhulu ye-steroid, kwaye i-ester propionate iphumela kwimeko apho iindawo zegazi zilawulwa ngempumelelo, kwaye ukuyeka ukusetyenziswa kuya kuzisa ukukhawuleza ngokukhawuleza kwiimilinganiselo zegazi kumsebenzisi. Yilokho eyenza imveliso ithandwa ngabadlali beentombi.
Uhlobo olunjani lwe-Testosterone Propionate powder (57-85-2) Sebenza
I-Gene transcription iqalile, apho ibhalansi ye-nitrogen emzimbeni ishintshi ngendlela efanelekileyo. Amanqanaba e-insulin efana nokwanda kweempawu ezinyuka kwiibindi kunye nezihlunu. Ipropionate ibangele ukwanda kwamathala e-satellites kwimisipha, ngenxa yokuba kukho ukubuyiswa kwemisipha kunye ne-hyperplasia. Ngendlela, zonke i-esters zineendlela ezifanayo zesenzo; Umbahluko ophezulu kukugxila kwimisebenzi kunye nezenzo zabo.
I-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Isisombululo
I-dose eqhelekileyo ye testosterone propionate yi-50-100mg nganye okanye enye imihla. Oku kunika umfanekiso weveki we-350mg-700mg. I-propionate isetyenziswa ngokuqhelekileyo ngexesha lokubamba amagama, kunye namanye ama-steroids angabonakaliyo njenge-winstrol okanye i-primobolan. Kwakhona kusebenza kakhulu ukudibanisa i-propionate kunye ne-androgen engenzi-aromatisti efana ne-trenbolone, eyayiza kubonakala ngokubonakala kanzima. Ukongeza ii-androgenic steroids ezininzi kwi-propionate kuya kubangela ukuba kubekho iziphumo ezichaphazelekayo ze-androgen.
I-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) benefits
I-Testosterone propionate inzuzo:
Ukwandisa ubunzima bomzimba kunye namandla
Ukutshisa amafutha, ukwandisa ukuphakama
Ukunciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo nesiconon
Iprofayili ye protosterone iphambili yexesha elifutshane. Le yiyona testersterone ester esheshayo. Ngako oko, iilenki zivame ukwenza ngosuku okanye yonke imihla. Empeleni oku kukungalungi okuthelekiswa namanye ama-esters ahlala ixesha elide.
Ukuphononongwa kwe-Testosterone propionate kubonisa ukuba emva kokugqitywa uya kuziva ukhulula ngamandla, kudibaniswa namanqanaba okwanda kwe-hormone emzimbeni. Oko kukuthi, xa isilwanyana sibonakala emzimbeni, siphuthuma ngokukhawuleza kwigazi, ngoko kuyavalelwa emva kwejoyi lokuqala. Oku kukho kokubili kunye nee-minus. I-plus yile nangoko emva kwesojojova uvakalelwa ngamandla, kwaye ukugqithiswa kwinto yokuba isicatshulwa sisula ngokukhawuleza ixesha elifutshane. Kufuneka ujobe rhoqo (imihla ngemihla okanye yonke imihla).
Kwabaninzi abagijimi, izidakamizwa azigcini ngamanzi emzimbeni (okanye incinci kakhulu), ngoko le nkunkuma (i-propionate) ayiyi kubangela i-spike esheshayo emzimbeni omzimba (isib. 5-6 kg kwiiveki ezimbalwa) the lekisa nezinye i esters. Nangona kunjalo, i-testosterone propionate ibangela ukuzuza ubunzima ngexesha le-propionate liphezulu kakhulu ngokungafani nabanye. Kukho ipros and cons.
Olunye umphumo we-testosterone propionate xa kuthelekiswa namanye ama-esters kukuba i-testosterone propionate yithenga ibiza kakhulu. Kwaye ngenxa yokuba isilwanyana singasetyenziselwa ukutshatyalaliswa kobunzima besisundu, kunye nexesha lokuvutha kwamanqatha amaninzi, ngoko akusiyo ingqiqo ukuyibeka kwisisindo (kuba ixabiso, kwaye iilenki kufuneka zenziwe phantse nsuku zonke, ngoko akunakuncedo kwisisindo). Ngoko, abaninzi abagijimi bakhetha ezinye iziyobisi ngokuphathelele ubunzima, kwaye baxhaswa ngamafutha amaninzi.
Thenga i-Testosterone Propionate powder eBuasas.com
I-Testosterone ebomvu isocaproate powder (15262-86-9)
I-Raw Testosterone phenylpropionate powder (1255-49-8)